Selfie လှလှ ရိုက်ရအောင် – ADS Myanmar Blog
Selfie လှလှ ရိုက်ရအောင်
အခုဆိုရင် လူတိုင်းရဲ့ လက်ထဲမှာ mobile ဖုန်းလေးတွေကိုယ်စီကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေ ကြပြီပေါ့နော်။ mobileဖုန်းကိုင်တဲ့ သူတိုင်း အမြဲလုပ်ြဖစ်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ Selife ရိုက်တာပါ……..
Selfie ရိုက်လေ့ရိုက်ထမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှ အနည်းဆုံး တစ်ပုံလောက်တော့ ရိုက်ဖူးမှာပါပဲ…..
Selfie ရိုက်ပြီး Social Network မှာ upload လုပ်တာကတော့ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အလေ့အထလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ….
Selfieကို ကိုယ့်ဘာသာကိုပျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ hangout ထွက်လို့ selfie ရိုက်ချင်တာ ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှတ်တရ အနေနဲ့ဘဲရိုက်ရိုက် စတိုင်ကျနမှ ဖြစ်မှာနော့်…..
ဒါကြောင့်မို့ Selfie ကောင်းကောင်းတစ်ပုံရဖို့ သိထားရမယ့် အချက်လေးတွေကို ads.com.mm ကနေပြောပြပေးသွားမှာပါ…..
လူတော်တော်များများက Selfie ရိုက်ရင် တည့်တည့်ကြီးရိုက်တာတွေ ရူ့ထောင့်တစ်မျိုးထဲစွဲရိုက် တာတွေ မလုပ်ဘဲ ထောင့်ပေါင်း စုံကနေ ပုံစံပေါင်းစုံ ပြောင်းပြီးရိုက်ပေးပါ။ ကိုယ်ယူထားတဲ့Angel နဲ့လိုက်ပြီး မေးလေးနည်းနည်း မော့ပေးတာ၊ မျက်လုံးလေးနည်းနည်းစောင်းကြည့်တာလေးတွေ လုပ်ဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်……
၂။ အသစ်အဆန်းလေးတွေ မျှဝေမယ်
အသစ်အဆန်းဆိုလို့ အထွေအထူးမဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်ကေ အသစ်ပြောင်းလာရင် ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နားကတ်အသစ်၊ ကလစ်အသစ်လေးဝယ်လာရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် Selfie နဲ့မှတ်တမ်းတင် ထားလိုက်ပါ။ အသစ်အဆန်းလေးတွေက လူတွေ ရဲ့အာရုံကို ပိုဆွဲဆောင်တယ်နော့်……..
တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး “အပြုံး” လေးတစ်ခုပါဘဲ ။ စိတ်ပါလက်ပါပြုံးနေတဲ့ Selfie လေးဆို ဘယ်အချိန်ကြည့် ကြည့်စိတ်ကျေနပ်စေမှာပါ…….
၄။ တစ်မျိုးထဲကို အသားပေးပါ
မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ selfie ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲလေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Smokey Eyes လေး ကိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အသားပေးရိုက်ပေးရင် ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာပါ…….
ကိုယ့်အပြုံးကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ပြင်လို့ရပါတယ်။ မျက်မှောင်ကြုတ်တာ ထီမထင် အကြည့်လေးတွေကြည့်တာ ကလဲ ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးရှိစေပါတယ်……
၆။ တစ်ကိုယ်လုံးအပြည့်ပုံလေးတွေလည်း ရိုက်လို့ရပါတယ်
၀တ်စုံအသစ်လေးတွေ ၀တ်ထားတာ ဒါမှမဟုတ် ၀ိတ်ချထား တဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်လှလှ လေးကို ကြွားချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုံးအပြည့်ပုံလေးတွေကို မှန်ရှေ့မှာရိုက်တာ တနည်းပြော မယ်ဆိုရင် Mirror Selfie ကပိုသင့်တော်ပါတယ်။ နောက် ကိုယ်က အရမ်းဝနေတယ်လို့ရင် ကိုယ်လေးကိုနည်းနည်းစောင်းရိုက်လိုက်ပါ။ဒါဆို သူငယ်ချင်းတွေက “ဟယ် ပိန်သွားတယ်နော်” ဆိုပြီးတော့တောင်ဝိုင်းပြီးချီးမွမ်းကြမလားပဲ……
၇။ သဘာဝအလှကို တန်ဘိုးထားပါ
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေကိုအထူးမှာချင်တာပါ။ မိတ်ကပ်ထူထူလိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ယှဉ်ရင် သဘာဝကျကျမျက်နှာလေးက ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Filter တွေကိုလည်း သိပ်မသုံးပါနဲ့။ Filter တွေကော မိတ်ကပ်တွေပါ ရှုတ်ရှက်ခတ်နေပြီး ရုပ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နဂိုမျက်နှာကို သိနေတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက ဝေဖန်ကြပါလိမ့် မယ်…..
ကိုယ့်ရဲ့ Social Network မှာဘယ်လို Pose လေးတွေက ခေတ်စားနေသလဲ ဆိုတာလေ့လာပါ။ တခါတလေတော့ Old Fashioned Pose လေးတွေကို ပြန်သုံးတာကလဲ စိတ်ဝင်စားမှုရစေပါတယ်။
Selfie ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ခံ (Background ) ကလည်း အရေး ကြီးပါတယ်။ အရမ်းရှုတ်ပွနေတဲ့နေရာ၊ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်း မရတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ သဘာဝအလင်း ရောင်ကတော့ ဓာတ်ပုံပညာရပ်အတွက် အကောင်းဆုံးပါ။ သတိထားရမှာက ဘယ်တော့မှ အလင်း( Lighting Source) ကိုကျောပေးမရိုက်ပါနဲ့။ မလို အပ်ဘဲ Flash မသုံးပါနဲ့။ မလိုအပ်ဘဲ Flash သုံးလိုက်ရင် နှဖူး၊ပါး၊နှာခေါင်း စတဲ့နေရာတွေမှာ အလင်းကျရောက်မှု များသွားနိုင်တဲ့ အပြင် redeye effect လည်းဖြစ်စေပါတယ်။
များသောအားဖြင့် Selfie ဆိုရင် Front Camera နဲ့ပဲရိုက်ကြတာများတယ်နော်။ တကယ်တမ်းကျတော့ Back Camera က resolution ပိုကောင်းတာပါ။ ဒါကြောင့် Back Camera ကိုပိုသုံးပေးပါ။ Back Camera ကိုသုံရင် ကိုယ့်ပုံကိုယ်မမြင်ရတော့တာကြောင့် ကိုယ့် သူငယ်ချင်တွေက အနောက်ကနေ၀င်ရှုတ်မှာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြည့်ရှာင်နော့်
ကဲကဲ………ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ မနက်ဖြန်ရုံးပိတ်ရက်မှာ Selfie လှလှလေးတွေရိုက်ပြီး ပျော်ရွင်စရာရုံး ပိတ်ရက်လေး ကိုဖန်တီးလိုက် ကြရအောင်!
Selfie ကောင်းကောင်းလေးတွေရိုက်ဖို့နဲ့ ယနေ့ခေတ်ရဲ့ မရှိမဖြစ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းအမျိုးပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော်ကို ads.com.mm ရဲ့ https://www.ads.com.mm/mobile-phones-tablets မှာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရငြ လူတိုငြးရဲ့ လကထြဲမှာ mobile ဖုနြးလေးတှကေေိုယစြီကိုယစြီနဲ့ အလုပရြှုပနြေ ကှပှီပေါ့နြော။ mobileဖုနြးကိုငတြဲ့ သူတိုငြး အမှဲလုပြှဖစနြတေဲ့ ကိဈစတစခြုကတော့ Selife ရိုကတြာပါ……..
Selfie ရိုကလြရေို့ကထြမရှိဘူးဆိုရငတြောငမြှ အနညြးဆုံး တစပြုံလောကတြော့ ရိုကဖြူးမှာပါပဲ…..
Selfie ရိုကပြှီး Social Network မှာ upload လုပတြာကတော့ဒီဘကခြတရြေဲ့ အလအေ့ထလေးတစခြုဖှစနြပေါပှီ….
Selfieကို ကိုယြ့ဘာသာကိုပငြွးလို့ပဲဖှစဖြှစြ၊ သူငယခြငြွးအပေါငြးအသငြးတှနေဲ့ hangout ထှကလြို့ selfie ရိုကခြငွတြာ ဘဲဖှစဖြှစြ၊ အမှတတြရ အနနေဲ့ဘဲရိုကရြိုကြ စတိုငကြနွမှ ဖှစမြှာနေြာ့…..
ဒါကှောငြ့မို့ Selfie ကောငြးကောငြးတစပြုံရဖို့ သိထားရမယြ့ အခကွလြေးတှကေို ads.com.mm ကနပှေောပှပေးသှားမှာပါ…..
လူတောတြောမြွားမွားက Selfie ရိုကရြငြ တညြ့တညြ့ကှီးရိုကတြာတှေ ရူ့ထောငြ့တစမြွိုးထဲစှဲရိုကြ တာတှေ မလုပဘြဲ ထောငြ့ပေါငြး စုံကနေ ပုံစံပေါငြးစုံ ပှောငြးပှီးရိုကပြေးပါ။ ကိုယယြူထားတဲ့Angel နဲ့လိုကပြှီး မေးလေးနညြးနညြး မော့ပေးတာ၊ မကွလြုံးလေးနညြးနညြးစောငြးကှညြ့တာလေးတှေ လုပဖြို့လဲ မမနေဲ့နြော……
၂။ အသစအြဆနြးလေးတှေ မွှဝမယြေ
အသစအြဆနြးဆိုလို့ အထှအထေူးမဟုတပြါဘူး။ ဆံပငကြေ အသစပြှောငြးလာရငြ ပဲဖှစဖြှစြ ၊ နားကတအြသစြ၊ ကလစအြသစလြေးဝယလြာရငဘြဲဖှစဖြှစြ Selfie နဲ့မှတတြမြးတငြ ထားလိုကပြါ။ အသစအြဆနြးလေးတှကေ လူတှေ ရဲ့အာရုံကို ပိုဆှဲဆောငတြယနြေြာ့……..
တခှားတော့မဟုတပြါဘူး “အပှုံး” လေးတစခြုပါဘဲ ။ စိတပြါလကပြါပှုံးနတေဲ့ Selfie လေးဆို ဘယအြခွိနကြှညြ့ ကှညြ့စိတကြွနပေစြမှောပါ…….
၄။ တစမြွိုးထဲကို အသားပေးပါ
မိနြးကလေးတှအနေနေဲ့ selfie ရိုကတြော့မယဆြိုရငြ နှုတခြမြးနီရဲရဲလေးကိုပဲဖှစဖြှစြ ၊ Smokey Eyes လေး ကိုဘဲဖှစဖြှစြ အသားပေးရိုကပြေးရငြ ဆှဲဆောငမြှုပိုရှိစမှောပါ…….
ကိုယြ့အပှုံးကို မကှိုကဘြူးဆိုရငြ ပှငလြို့ရပါတယြ။ မကွမြှောငကြှုတတြာ ထီမထငြ အကှညြ့လေးတှကှညြေ့တာ ကလဲ ဆှဲဆောငမြှုတစမြွိုးရှိစပေါတယြ……
၆။ တစကြိုယလြုံးအပှညြ့ပုံလေးတှလညြေး ရိုကလြို့ရပါတယြ
ဝတစြုံအသစလြေးတှေ ဝတထြားတာ ဒါမှမဟုတြ ၀ိတခြထွား တဲ့ ကိုယြ့ခနျဓာကိုယလြှလှ လေးကို ကှားခငွတြယဆြိုရငြ ကိုယလြုံးအပှညြ့ပုံလေးတှကေို မှနရြှမှေ့ာရိုကတြာ တနညြးပှော မယဆြိုရငြ Mirror Selfie ကပိုသငြ့တောပြါတယြ။ နောကြ ကိုယကြ အရမြးဝနတယေလြို့ရငြ ကိုယလြေးကိုနညြးနညြးစောငြးရိုကလြိုကပြါ။ဒါဆို သူငယခြငြွးတှကေ “ဟယြ ပိနသြှားတယနြော” ဆိုပှီးတော့တောငဝြိုငြးပှီးခွီးမှမြးကှမလားပဲ……
၇။ သဘာဝအလှကို တနဘြိုးထားပါ
ဒါကတော့ မိနြးကလေးတှကေိုအထူးမှာခငွတြာပါ။ မိတကြပထြူထူလိမြးထားတဲ့ မကွနြှာနဲ့ ယှဉရြငြ သဘာဝကကွမွကွနြှာလေးက ပိုပှီးဆှဲဆောငမြှုရှိတာကို သတိပှုစခငွေပြါတယြ။ နောကပြှီး Filter တှကေိုလညြး သိပမြသုံးပါနဲ့။ Filter တှကေော မိတကြပတြှပေါ ရှုတရြှကခြတနြပှေီး ရုပပြှောငြးသှားမယဆြိုရငြ ကိုယြ့နဂိုမကွနြှာကို သိနတေဲ့ ကိုယြ့သူငယခြငြွးတှကေ ဝဖနေကြှပါလိမြ့ မယြ…..
ကိုယြ့ရဲ့ Social Network မှာဘယလြို Pose လေးတှကေ ခတစြေားနသလေဲ ဆိုတာလလေ့ာပါ။ တခါတလတေော့ Old Fashioned Pose လေးတှကေို ပှနသြုံးတာကလဲ စိတဝြငစြားမှုရစပေါတယြ။
Selfie ပဲဖှစဖြှစြ ၊ ဓာတပြုံရိုကရြငပြဲဖှစဖြှစြ နောကခြံ (Background ) ကလညြး အရေး ကှီးပါတယြ။ အရမြးရှုတပြှနတေဲ့နရော၊ အလငြးရောငကြောငြးကောငြး မရတဲ့နရောတှကေို ရှောငသြငြ့ပါတယြ။ သဘာဝအလငြး ရောငကြတော့ ဓာတပြုံပညာရပအြတှကြ အကောငြးဆုံးပါ။ သတိထားရမှာက ဘယတြော့မှ အလငြး( Lighting Source) ကိုကွောပေးမရိုကပြါနဲ့။ မလို အပဘြဲ Flash မသုံးပါနဲ့။ မလိုအပဘြဲ Flash သုံးလိုကရြငြ နှဖူး၊ပါး၊နှာခေါငြး စတဲ့နရောတှမှော အလငြးကရွောကမြှု မွားသှားနိုငတြဲ့ အပှငြ redeye effect လညြးဖှစစြပေါတယြ။
မွားသောအားဖှငြ့ Selfie ဆိုရငြ Front Camera နဲ့ပဲရိုကကြှတာမွားတယနြော။ တကယတြမြးကတွော့ Back Camera က resolution ပိုကောငြးတာပါ။ ဒါကှောငြ့ Back Camera ကိုပိုသုံးပေးပါ။ Back Camera ကိုသုံရငြ ကိုယြ့ပုံကိုယမြမှငရြတော့တာကှောငြ့ ကိုယြ့ သူငယခြငွတြှကေ အနောကကြနဝငေရြှုတမြှာကိုတော့ ကိုယြ့ဘာသာကိုယြ ကှညြ့ရှာငနြေြာ့
ကဲကဲ………ဒီလောကဆြိုရငတြော့ မနကဖြှနရြုံးပိတရြကမြှာ Selfie လှလှလေးတှရေိုကပြှီး ပွောရြှငစြရာရုံး ပိတရြကလြေး ကိုဖနတြီးလိုကြ ကှရအောငြ!
Selfie ကောငြးကောငြးလေးတှရေိုကဖြို့နဲ့ ယနခေ့တရြေဲ့ မရှိမဖှစတြှထေဲကတစခြုဖှစတြဲ့ စမတဖြုနြးနဲ့ မိုဘိုငြးလြ ဖုနြးအမွိုးပေါငြး (၂၀၀၀) ကွောကြို ads.com.mm ရဲ့ https://www.ads.com.mm/mobile-phones-tablets မှာရှေးခယွနြိုငပြါတယြ။
Author hsulattPosted on January 8, 2016 January 18, 2016 Categories OtherTags Selfie လှလှ ရိုက်ရအောင်
Previous Previous post: ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင် ပြုမူနေထိုင်ရေးဖို့အတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းငါးသွယ်
Next Next post: ဂီတ၀ါသနာအိုးတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေစုံလင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခု